Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 10)
Fikafika SwiftKey 3 izay tsy maintsy ampiasaininao hanatsarana ny traikefanao amin'ny fanoratana amin'ny findainao
SwiftKey dia rindrambaiko fitendry lehibe ary ireo hafetsena ireo dia mahatonga antsika hahafinaritra kokoa rehefa manoratra amin'ny chat, tambajotra sosialy sy maro hafa.
Fomba fanadiovana imailaka amin'ny ankapobeny amin'ny tsindry vitsivitsy monja
https://youtu.be/n-8JRlI-0hE En este nuevo vídeo tutorial práctico, o en este caso en concreto más bien consejo, os voy a enseñar la mejor manera de poner Sencillo vídeo en el que les enseño, gracias a una app gratuita, como limpiar correos electrónicos masivamente y en muy pocos clicks.
Manatsara ny YouTube Kids amin'ny alàlan'ny fitaovana fanakanana ny ray aman-dreny
YouTube Kids manome fitaovana fanakanana bebe kokoa ho an'ny ray aman-dreny. Fantaro misimisy kokoa momba ny fanovana natao tamin'ny app.
Ahoana ny fananana ny ridao fampandrenesana Android P
https://youtu.be/Zt5Hs5mOSJo Gracias a un usuario de la gran comunidad Androidsis, concretamente un usuario que dejó su comentario directamente en Vídeo en el que sin necesidad de Root les voy a mostrar como tener el telón de notificaciones de Android P incluso con muchas más opciones de configuración.
Mamelatra, fampiharana mahaliana hamoronana Instagram Stories amin'ny fomba tsotra
Unfold dia fampiharana tonga lafatra hamoronana atiny ho an'ny Instagram Stories. Raha mpankafy Instagram ianao dia fampiharana tsy azo ihodivirana izany.
Spotify telo ny isan'ny mozika azontsika sintonina
Spotify dia hamela antsika hisintona ireo hira telo. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao natolotry ny fampiharana soedoà malaza.
Hitsahatra tsy hanavao ny Inbox i Google amin'ny volana martsa 2019
Hitsahatra tsy hanavao ny Inbox i Google amin'ny fiandohan'ny taona 2019. Jereo bebe kokoa momba ny fanapahan-kevitry ny orinasa hametraka ny fanohanany.
Miaraka amin'ny fialofana ianao dia hitahiry manokana ny angon-drakitrao avy amin'ny famandrihan-tànana amin'ny fampiharana marobe
Raha tsy mila fampiharana haka ny angona voaray avy amin'ny Google API an'ny findainao ianao, dia rindrambaiko malalaka malalaka mamorona Sandbox i Shelter.
Tokony ho toy izany ny fampandrenesana Android an'ny teratany !!
https://youtu.be/-FRPOeQRp5U Dando una vuelta por la tienda de aplicaciones para Android, justamente en la sección de recomendaciones, me he topado de Así tendrían que ser las notificaciones Android, y es que gracias a esta app gratuita vamos a tomar el orden y control de todas las notificaciones entrantes
Tonga ao amin'ny Tinder ny «Top Picks»: lisitra iray isan'andro sy ho an'ny mety indrindra amin'ny «match»
Miaraka amin'ny Tinder Gold dia ho eny an-tananao ny Top Picks, isan'andro, lisitra manokana an'ny lalao mety hanombohana finamanana.
Niagara Launcher, mpandefa fampiharana ho an'ireo mpampiasa mitady zavatra hafa
Raha mitady traikefa hafa ianao rehefa mihodina amin'ny findainao, Niagara Launcher dia mpandefa fampiharana izay manome azy tanteraka. Amin'izao fotoana izao amin'ny beta.
Ny endri-javatra vaovao mahavariana an'ny MIUI 10: manadio WhatsApp amin'ny toerana kely hitadiavana toerana
Ary ny fanadiovana WhatsApp dia midika famafana ireo tahirin-kevitra tahiry rehetra avy amin'ny sary, memo feo, horonan-tsary sy maro hafa.
Huawei Video: Tonga any Espana ny serivisy streaming
Huawei Video: serivisy streaming vaovao an'i Huawei. Fantaro bebe kokoa momba ity sehatra streaming ity izay efa natolotry ny marika sinoa.
Mods 3 ho an'ny WhatsApp hanamboarana ny fampiharana
Jereo ireto mods telo azonao sintonina ireto hanamboarana ny fampiasana ny WhatsApp. Ovao ny interface-dry zareo ary mahazoa fiasa fanampiny miaraka amin'izy ireo.
Fampiharana naoty tsy mampino ho an'ny Android !!
https://youtu.be/VDuimrL3DEs Si eres de los que usa mucho los apuntes y se aprovecha de su terminal Android para hacerlo, entonces te aconsejo que no te Os presentamos una increible aplicación de notas para Android con la que tener muy a mano las funcionalidades básicas de las aplicaciones de notas y mucho más
Ny sary sy ny SMS dia efa ampifanarahana amin'ny Android amin'ny programa Windows 10 'Insider Preview'
Fampisehoana Microsoft Your App tonga amin'ny kinova farany amin'ny fanavaozana lehibe Windows 10. Ampifanaraho ireo sary sy SMS.
Firefox dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny rafitry ny fampandrenesana
Tsy ny Chrome ihany no afaka miaina ny mpampiasa Android, na eo aza ny fampidirina ho azy amin'ny fitaovana Android rehetra mahatratra ny fanarahana ny torolàlana napetraky ny Mozilla Foundation, dia manohy manatsara ny fiainantsika manokana i Firefox amin'ny alàlan'ny fanitarana ny asany.
Ny maody maizina dia tonga ao amin'ny Google Feed ihany koa
Google maody lasa maody maizina koa. Fampiharana iray vaovao no manatevin-daharana ny lisitra ary efa mahazo an'ity maody maizina ity amin'ny Google, na eo aza ny fitsapana.
Tor Browser dia natomboka tamin'ny Play Store ihany amin'ny farany
Tor Browser tonga amin'ny fomba ofisialy ho an'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ny fandefasana ity browser ity ho an'ny telefaona Android efa ao amin'ny Play Store.
Ahoana ny fomba hanajanonana ny Google Assistant amin'ny telefaonao
Ahoana ny fomba hanajanonana ny Google Assistant amin'ny Android. Leo ny Mpanampy Google ve ianao? Ampianarinay anao ny fomba tsy hampiasana azy amin'ny telefaona amin'ny fomba tsotra.
Fetsy hahazoana bebe kokoa amin'ny NFC findainao
Fomba roa hivoahana bebe kokoa amin'ny NFC Android anao. Jereo ireo fikafika tsotra ireo ary mivoaha bebe kokoa amin'ity teknolojia ity.
Ahoana ny fomba hitahiry resaka WhatsApp amin'ny teny
Ahoana ny fomba hitahiry resaka WhatsApp amin'ny teny iray. Jereo ireo dingana arahinao mba hahazoana ilay chat amin'ity endrika ity amin'ny findainao.
Ahoana ny fomba hampiasana bokotra ara-batana an'ny Google Assistant amin'ny telefaona Android
Ahoana ny fomba hampiasana ny bokotra ho an'ny Google Assistant amin'ny findainao Android. Tadiavo ireo dingana hahazoana ity bokotra ara-batana ity amin'ny telefaona.
[APK] Fakan-tsary MIUI Port
https://youtu.be/csF44xg_YzM Volvemos con una de esas cosas que tanto nos gustan a los usuarios del sistema operativo Android, y es que está más que Gracias a Engel, usuario de la comunidad Androidsis en Telegram, hoy queremos compartir con todos vosotros un port de la cámara de MIUI propia de Xiaomi.
Sintomy ny seranan-tsambo farany miasa amin'ny Google Pixel GCam ho an'ny Samsung Galaxy S9
Ary farany, ho an'ny kinova Exynos an'ny Galaxy S9 dia misy seranana miasa izay ahafahanao mampiasa maody fakana sary sy HDR + 2017 an'ny Google Pixel.
Adinoy ny YouTube, manome volo an'arivony azy ny YouTube Vanced: tsy misy ROOT, tsy misy doka ary tsy misy fiaviany
Raha te hanana traikefa tsara indrindra amin'ny YouTube ianao dia ampidino ny YouTube Vanced hanadino ireo doka ary hilalaovana any aoriana.
[APK] Sintomy izao ny interface Netflix vaovao miaraka amin'ny fivezivezena eo ambany
Tonga ilay interface vaovao izay mety efa anananao amin'ny findainao. Raha tsy izany dia apetraho ny APK Netflix mba hidirana ao aminy.
Ahoana ny fomba hampiasana ny fomba voafetra ao amin'ny YouTube
Tao anatin'izay volana lasa izay, nampiditra fisehoan-javatra vaovao marobe ao anatin'ny fampiharana flagship, YouTube, ilay goavambe fikarohana. Iray amin'ireo lehibe indrindra Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba ahafahantsika mampihetsika ny maody voafetra ao amin'ny YouTube, mba hisorohana ny ankizy tsy hiditra atiny mora tohina.
(Nohavaozina, ampio horonan-tsary) Ahoana ny fomba hampiasana ny lohahevitra maizina YouTube ankehitriny fa efa misy io
https://youtu.be/gm4MexlNB2Q Con la llegada de las pantallas OLED a los smartphones, muchos son los desarrolladores que han comenzado a adaptar sus(Actualizado, añadido vídeo) El modo oscuro ya está disponibe oficialmente a través de la aplicación YouTube para Android. Os mostramos cómo activarlo.
Google Play dia handefa programa tsy fivadihana
Google Play dia hanomboka ny programa tsy fivadihana tsy ho ela. Fantaro bebe kokoa momba ity programa ity izay ho avy tsy ho ela amin'ny fivarotana app.
Ahoana ny fandrefesana ny halavirana marina amin'ny app Google Measure amin'ny findainao Android
Ny fandrefesana dia fampiharana ahafahantsika maka ny rindranasan'ny fakantsarantsika mba handrefesana zavatra na halavirana amin'ny toerana rehetra.
WhatsApp beta dia manome olana an-tsoratra amin'ny feo 2.18.271
WhatsApp beta kinova 2.18.271 dia tsy mamela hilalao memo feo. Manidy ny rindrambaiko izy ireo rehefa manandrana mamerina azy ireo mba hahagaga ny maro.
Instagram dia mamorona fampiharana manokana ho an'ny fividianana: IG Shopping
IG Shopping dia ho lasa fampiharana Instagram manokana natokana amin'ny fiantsenana. Afaka mividy amin'ny magazay tianao indrindra ianao izao.
Mi X Launcher, mpandefa MIUI 10
https://youtu.be/enpgcUISrX0 Nuevo vídeo en el que les muestro al detalle un nuevo Launcher gratuito para Android, el cual nos ofrece la casi total Mi X Launcher ? - MI 10 Launcher + es un Launcher que clava el aspecto gráfico y algunas de las mejores funcionalidades del Launcher de MIUI 10 de Xiaomi.
Google dia manala ny Rootless Pixel Launcher amin'ny Play Store
Herinandro latsaka kely lasa izay, ny 29 Aogositra, i Manu mpiara-miasa amiko dia nampahafantatra anao ny fahatongavan'i Rootless Pixel Launcher tao amin'ny Play Store, Google dia nanala ny fampiharana Rootless Pixel Launcher tao amin'ny Play Store satria nandika ny torolalan'ny orinasa izany. .
Hankafy ny fampandrenesanao Android indray ianao.
https://youtu.be/tzrbOgJ5vK8 Si hace un ratito tan solo os he recomendado mediante vídeo review de una aplicación gratuita para Android, la forma de Voverás a disfrutar de las notificaciones de tu Android gracias a estas espectaculares notificaciones animadas gratuitas.
Ahoana ny fomba hamelomana ny bara fitetezana Android anao amin'ny sarimiaina mahafinaritra
https://youtu.be/oKobpwOHq_o Volvemos con un nuevo vídeo, en esta ocasión con una espectacular aplicación especialmente pensada para todos aquellos Vídeo en el que les muestro como tunear la barra de navegación Android, botones en pantalla, con divertidas y elegantes animaciones.
Stuff dia widget mahavariana sy maimaim-poana handraisana na lisitry ny zavatra tokony hatao tsy misy fetra
Raha mitady widget lisitra matanjaka sy tsotra hatao ianao, ny Stuff dia iray miavaka izay azonao maimaim-poana.
Ny fanandramana ny lalao alohan'ny hividianana azy ireo dia ho zava-misy ao amin'ny Play Store
Betsaka ny mpampiasa tsy te-hividy fampiharana na lalao raha tsy manandrana azy io aloha, satria ny fizotry ny fiverenana dia tsy ilay lazaina fa tsotra intsony tsy ho ela, afaka hizaha toetra ny rindranasa sy ny lalao ao amin'ny Pla Store isika raha tsy manana hividy azy ireo taloha na hampidina azy ireo piraty
Ity no kinova vaovao an'ny Samsung Health: interface vaovao ary mandrefy ny haavon'ny fihenjanana ankehitriny
Samsung Health dia tonga amin'ny kinova 6.0 hametrahana ny tenany ho fampiharana ara-pahasalamana tsara indrindra ankehitriny. Ankehitriny ianao dia afaka mandrefy ny adin-tsaina ary mankafy interface tsara vaovao.
Ahoana ny fomba hampiasana ny fomba Incognito ao amin'ny YouTube ho an'ny Android
Ny mode Incognito dia nanjary laharam-pahamehana ho an'ny mpampiasa maro tato ho ato, na dia tena tsy mahavita izay rehetra ampanantenainy aza izy io satria ny mazoto amin'ny alina amin'ny YouTube dia mamela antsika tsy hamela soritra amin'ny finday avo lenta amin'ny fikarohana ataonay.
Nova Video Player, mpilalao horonantsary loharano malalaka kalitao ho an'ny telefaonao na Android TV
Nova Video Player dia loharano misokatra ary manolotra andian-toetra tsara manaitra mba hisolo toerana ilay VLC Player malaza.
Hanomboka hanakanana ireo mpanara-maso navigateur i Firefox manomboka amin'ny taona 2019
Na eo aza ny zava-misy fa ny tsirairay dia mampiasa ny Google amin'ny ankamaroan'ny tontolo iainana, na ny birao na ny finday, miaraka amin'ny alàlana avy amin'ny Safari amin'ny iOS, eny an-tsena Hatramin'ny taona 2019, ny Firefox browser dia hanomboka hanakana ireo script mpanara-maso izay ahafahana mampitombo ny hafainganan'ny fitetezana sy hampihena ny fanarahana ny ireo tranonkala vangainay.
Google Assistant dia afaka mahatakatra fiteny roa amin'ny fotoana iray
Google Assistant dia efa mahatakatra fiteny roa miaraka. Fantaro bebe kokoa momba ny teknolojia vaovao ampiasain'ny mpamosavy izao.
Ampidino izao ny APK an'ny POCO Launcher, mpandefa fampiharana izay tena matsiro toy ny "kely"
Tsy azo lazaina firy momba ny POCO Launcher, ilay mpandefa fampiharana Pocophone F1 natomboka androany tany India. Miankina amin'ny safidy.
Azonao atao izao ny misintona ny Rootless Pixel Launcher avy amin'ny Google Play Store
Rootless Pixel Launcher dia marina tsara amin'ny kinova voalohany an'ny Google Pixel launcher. Ankehitriny ho an'ny rehetra manana Android 5.0 na avo kokoa.
Tonga tao Espana tamin'ny fomba ofisialy ny Facebook Watch
Facebook Watch dia efa misy any Espana. Jereo ny serivisy horonantsary vaovao izay tafiditra ao anaty tambajotra sosialy malaza indrindra.
Ny maody maizina dia tonga amin'ny app an'ny finday Google
Ny mazoto telefaona Google dia hahazo maody maizina. Fantaro ny momba ilay rindranasa vaovao hanatevin-daharana ny maody maizina ho avy tsy ho ela.
Beta farany amin'ny Apple Music ho an'ny Android dia manolotra mifanentana amin'ny Android Auto
Rehefa nandeha ny taona ary toa toa nanomboka roa ny tsena mozika mivantana, dia Google sy Amazon no ho Ny andiany manaraka an'ny Apple Music for Android, dia hisy ny fanohanana ny Android Auto, izay ahafahanao mifehy ny playback avy amin'ny foibe multimedia an'ny fiaranay.
Telegram 4.91: Fanatsarana ny pasipaoro ary fampandrenesana tsara kokoa
Telegram dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana ny Passport sy ny fampandrenesana. Jereo ny fiovana ao amin'ilay kinova fandefasan-kafatra vaovao.
PowerPoint, Excel ary OneDrive dia mihoatra ny 500 tapitrisa alaina ao amin'ny Play Store
Maromaro ny taona niasan'ny mpampiasa mampiasa ny finday avo lenta indrindra amin'ny asa, niandry ny fanombohana ny Office Ny rindranasa izay ampahan'ny Office for Android, dia nihoatra ny 500 tapitrisa ny fampidinana tao amin'ny Play Store.
Ny hafatra Android dia manolotra ny lohahevitra maizina ao amin'ny fampiharana
Ny hafatra Android dia havaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana maody maizina. Fantaro ny maody maizina izay tonga amin'ilay fampiharana fandefasan-kafatra.
PayPal dia manavao ny famolavolana ny fampiharana azy
PayPal dia hampiditra endrika vaovao amin'ny herinandro ho avy. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fanovana natolotry ny fampiharana fandoavambola.
Fomba famafana fampiharana amin'ny Android
Fomba efatra hanalana ny rindranasa amin'ny Android. Jereo ireo fomba ahafahantsika manala fampiharana iray amin'ny finday.
Magisk dia tsy hiasa amin'ny telefaona Huawei intsony
Mijanona tsy miasa amin'ny telefaona Huawei i Magisk. Fantaro misimisy kokoa ny fanapahan-kevitry ny marika sinoa hanakana ny fampiharana.
Ny fampiharana fiarovana tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana fiarovana dimy tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity safidin'ireo rindranasa fiarovana ity ao amin'ny Play Store.
Shortwave, izany no anaran'ny fampiharana podcast vaovao izay iasan'ny Google
Ela kokoa noho ny nantenain'ny mpampiasa Android hanolotra fampiharana ofisialy hankafizan'ny podcast i Apple. Koa satria ny Google's App Incubator dia miasa amin'ny fampiharana podcast ho an'ny Android antsoina hoe Shortwave
Nohavaozina tanteraka ny Google Fit mba hamporisihana anao hanatsara ny endrika ara-batana sy ny fahasalamanao
Ny fanavaozam-baovao Google Fit vaovao dia mila anao hiala amin'ny sezanao ary manomboka mandeha isan'andro farafaharatsiny. Manatsara ny fahasalamanao daholo.
Manaraka avy amin'ny Instagram: memo feo amin'ny hafatra mivantana
Raha mpankafy ity tambajotra sosialy ity ianao dia efa fantatrao fa hisy fanavaozana tsy ho ela izay hahafahanao mampiasa naoty am-peo amin'ny hafatra mivantana avy amin'ny Instagram.
Gmail for Android dia mamela anao hanafoana ireo hafatra nalefanao
Gmail for Android dia mamela anao hanafoana ny fandefasana hafatra. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao natolotry ny fampiharana.
Ahoana ny fampidinana ny gReader, iray amin'ireo mpamaky RSS tsara indrindra izay nanjavona tao amin'ny Google Play Store
Gaga izahay fa nanjavona tao amin'ny Google Play Store ny gReader anay. Atorinay anao ny fomba fampidinana ity mpamaky RSS ity indray.
Microsoft's sticky Notes hanombohana amin'ity taona ity amin'ny Android
Hamoaka ny Sticky Notes ho an'ny Android i Microsoft amin'ity taona ity. Fantaro bebe kokoa momba ny famoahana ny fampiharana Notes amin'ny Android.
Snapchat dia handefa kinova vaovao an'ny fampiharana ho an'ny Android
Ny kinova Snapchat vaovao dia ho avy tsy ho ela amin'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ny kinova vaovao an'ny fampiharana izay ho avy tsy ho ela.
Ny fampiharana sary tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana sary tsara indrindra dimy ho an'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ireo rindranasa azonay alaina amin'ny Android.
Raha tena malahelo ny Sim City ianao dia ity ny Pocket City ho an'ny Android
Raha mpankafy ny Sim City taloha ianao dia ny Pocket City no mpisolo toerana tsara indrindra ho hitanao amin'ny Android ankehitriny. Tena tsara.
Fampiharana Android tsara indrindra ho an'ny mpitendry mozika
Ny fampiharana Android dimy tsara indrindra ho an'ny mpitendry mozika. Jereo ity safidin'ireo fampiharana hianarana mozika ity.
Fifanarahana teo amin'i Google sy WhatsApp: ny kopian'ny backup dia tsy isaina ho habaka ampiasaina ao amin'ny Google Drive
Noho ny fifanarahana vaovao nifanaovan'ny WhatsApp sy Google, ireo kopia nomaniny ho solon'izay kaonty WhatsApp anao dia tsy isaina ao amin'ny kaonty Google Drive anao.
Ny fampiharana fandraketana antso dia tsy mandeha amin'ny Android 9.0 Pie
Android 9.0 Pie dia manakana ny fampiharana tsy amin'ny firaketana antso. Fantaro bebe kokoa momba ny fanapahan-kevitra ao amin'ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa.
Google miasa amin'ny fanekena endrika ho an'ny Google Assistant
Google dia hanolotra ny fanekena endrika amin'ny Google Assistant. Fantaro bebe kokoa ny drafitry ny orinasa ho an'ny mpanampy anao.
Tonga amin'ny firenena 21 vaovao miaraka amin'ny endrika vaovao ny Twitter Lite
Ny Twitter Lite dia manitatra firenena 21 vaovao miaraka amina endrika vaovao. Fantaro bebe kokoa momba ny fandrosoan'ny fampiharana Lite eny an-tsena.
Fanavaozana ny app Google Phone miaraka amin'ny Material Design
Google Phone dia nohavaozina miaraka amin'ny Material Design ao amin'ny interface. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ny rindranasa telefaona.
Ny fampiharana tsara indrindra hanakanana ny antso amin'ny Android
Ireo rindranasa efatra tsara indrindra hanakanana ny antso amin'ny Android. Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa hita ao amin'ny Play Store ireo.
Netflix ho an'ny Android amin'ny HD / HDR ho an'ny telefaona vaovao
Manavao ny lisitry ny telefaona mifanentana HD / HDR i Netflix. Fantaro hoe iza amin'ireo telefaona Android vaovao nohamarinina.
Hanolotra fanovana sary 3D ny Google Photos
Google Photos dia hamela anao hanova sary amin'ny 3D. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fiasa vaovao tonga amin'ny fampiharana Android malaza.
[APK] Sintomy ary apetraho ireo fifandraisana Android P
https://youtu.be/fgwtxFeEuTs Volvemos con uno de esos vídeo tutoriales prácticos Android que tanto os gustan, y es que os voy a enseñar la manera de tener Ya puedes descargar e instalar los contactos de Android 9.0 Pie en cualquier tipo de terminal Android 5.0 o superior y sin ROOT.
Ireo emulator Nintendo 64 tsara indrindra ho an'ny Android
Ireo emulator Nintendo 64 tsara indrindra ho an'ny Android. Fantaro misimisy kokoa momba ity safidin'ny emulator alaina amin'ny Android ity.
Fampiharana Android tsara indrindra hanararaotana ny Twitter
Fampiharana Twitter enina tsara indrindra ho an'ny Android. Zahao ireo rindranasa ireo izay hialana bebe kokoa amin'ny fampiasanao Twitter.
WhatsApp dia hampiditra sary amin'ny maody sary
WhatsApp dia miasa amin'ny fampidirana ny sary amin'ny maody sary. Fantaro bebe kokoa momba ny vaovao izay ho tonga amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra.
[APK] Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana ny kinova Nokia farany ho an'ny terminal tsy Nokia
https://youtu.be/PboY7qGux5M Hace ya un par de meses que os enseñé en otro vídeo post a descargar e instalar la cámara de Nokia en terminales no Nokia. Aquís os traigo vídeo tutorial sobre cómo descargar e instalar la última versión de la cámara de Nokia para terminales No Nokia!!!
Ho tonga amin'ny WhatsApp ny doka amin'ny 2019
WhatsApp dia hampiditra ny doka amin'ny fampiharana amin'ny taona ho avy. Tonga amin'ny fomba fampiharana ofisialin'ny hafatra ireo fanambarana ireo.
Fampahatsiahivana haingana izao dia maimaim-poana mandritra ny 3 andro fotsiny!
https://youtu.be/yN7mtRlbDQ4 Una de las ventajas de tener entre los favoritos de tu navegador web el post que actualizamos a diario de Ofertas gratis por Quick Reminders ahora y durante tan solo tres días la podemos descargar de manera oficial desde el Play Store de Google y esto es todo lo que nos ofrece
Google dia miasa amin'ny rindranasa fikarohana manokana ho an'i Shina
Nandao an'i Shina tamin'ny taona 2010 i Google, noho ny fitakiana mitohy ataon'ny governemanta sinoa hanivanana ny ankamaroan'ny atiny natolotry ny motera fikarohana azy. Te-hiverina amin'ny tsena goavambe izay solontenan'i Shina ho an'ny orinasa teknolojia ilay goavana mitady.
YouTube for Android dia hampiditra ny swipe hifanakalo eo anelanelan'ny horonan-tsary
YouTube for Android dia hanolotra ny fihetsika swipe handefasana horonantsary. Fantaro bebe kokoa momba ny fihetsika ho avy tsy ho ela amin'ny fampiharana.
Facebook sy Instagram dia manolotra metatra fanaovana hetsika
Facebook sy Instagram dia mamela anao handrefy ny fampiasanao azy ireo. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao tonga amin'ireo fampiharana roa.
Google Clock dia mamela anao hisafidy hira Spotify ho fanairana amin'ny fanavaozana vaovao
Ny famantaranandro Google dia nohavaozina ary ankehitriny mamela anao hampiditra hira na lisitra avy amin'ny Spotify ho feom-panairana
Telegram X dia feno vaovao tamin'ny fanavaozana ny volana Jolay
Telegram X: mamela vaovao be ny fanavaozana ny volana jolay. Fantaro misimisy kokoa momba ny fanatsarana tonga tamin'ny fampiharana tamin'ity volana ity.
Tonga amin'ny YouTube ho an'ny Android ny maody maizina
YouTube for Android manomboka mampiditra maody maizina. Fantaro bebe kokoa momba ny fahatongavan'ity fampiasa ity amin'ny fampiharana horonan-tsary.
Telegram dia midina manerantany !!
Raha manana olana amin'ny fisoratana anarana ofisialy Telegram ianao na amin'ireo mpanjifany maro hafa misy, ajanony eo amin'ny sehatra manerantany ny fijerena ny fifandraisanao amin'i Telegram mandritra ny 30 minitra izao, izay sady tsy azo idirana amin'ny tranokala ofisialiny ilay fampiharana.
Pasipaoro Telegram: Tehirizo ao Telegram ny antontan-taratasinao
Telegram Passport dia singa vaovao iray ahafahanao mitahiry angona sy antontan-taratasy miaraka amina fampahalalana amin'ny fomba azo antoka
Ny fampiharana fandikan-teny tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana fandikan-teny dimy tsara indrindra ho an'ny Android. Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa fandikan-teny azonay alaina ao amin'ny Play Store.
Mandrara ny fampiharana doka, kopia ary fitrandrahana cryptocurrency ny Google Play
Google Play dia manova ny politikan'ny famoahana fampiharana. Fantaro misimisy kokoa momba ny fanovana atolotra ao amin'ny fivarotana app.
VLC tsy tohanan'ny Huawei !! Manome anao ny vahaolana amin'ny horonan-tsary izahay ary manazava ny antony
VLC dia tsy mifanaraka amin'ny Huawei intsony ary izany no antony nijanonan'ny fampiharana tsy hita tao amin'ny Play Store. Lazainay aminao ny anton'ity toe-javatra ity sy ny vahaolana.
Azonao atao izao ny mizara ny tantaran'ny Instagram amin'izay tianao amin'ny sticker vaovao
Instagram dia nandefa sticker iray vaovao izay ahafahanao misafidy izay hahita ny Instagram Stories izay ampakarinao ao amin'ny kaonty tambajotra sosialinao.
Sombin'ny mpilalao mozika !!
Ny baikon'ny feo ilaina indrindra an'ny Google Assistant mandritra ny iray andro eny amoron-dranomasina
Raha handeha ho eny amoron-dranomasina ianao dia ho lasa mpiara-miasa aminao indrindra ny Google Assistant hamaha ny findainao amin'ny feonao.
Ahoana ny fomba hitantanana hafatra am-peo WhatsApp
Chrome 68 dia efa mampiseho pejy tsy misy HTTPS ho tsy azo antoka
Google Chrome 68 dia mampiseho pejy tsy misy HTTPS ho tsy azo antoka. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ny browser an'ny Android.
Feo amin'ny hafatra an-tsoratra WhatsApp, na ny fomba famakiana ireo audio manatona anay amin'ny WhatsApp
Mamela antso video izao ny Google Assistant
Azo atao izao ny miantso video miaraka amin'i Google Assistant. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao tonga amin'ny Google Assistant.
Spectacular tsy misy vatasarihana fampiharana ROOT !!
https://youtu.be/6o8svvvKBDY Continuamos con aplicaciones muy interesantes para nuestros dispositivos Android, en este caso con un espectacular cajón de Un espectacular cajón de aplicaciones ultra rápido y con funcionalidades añadidas que no nos da nuestro cajón de aplicaciones tradicional
Ahoana ny fomba hanovana ny fampandrenesana findainao ho fampahatsiahivana amin'ny PushMe
PushMe dia fampiharana maimaim-poana izay manome anao ny fahaizana hanova ny tontonana fampandrenesana ho toerana iray ho an'ny fampahatsiahivana manokana.
Afaka miantso video miaraka amin'i Duo avy amin'ny Google Assistant ianao izao
Google Assistant dia nampiditra baiko am-peo vaovao ahafahanao miantso video amin'ny alàlan'ny fampiasana tsotra ny feonao.
Google Play dia manova ny famolavolana ny motera fikarohana
Google Play mandefa endrika vaovao ho an'ny motera fikarohana. Fantaro bebe kokoa momba ny famolavolana vaovao hitantsika ao amin'ny motera fikarohana.
Fampiharana mahatalanjona ho an'ny Android !!
https://youtu.be/BvvEAhHEGm8 En este nuevo vídeo post, les traigo una impresionante aplicación para Android que, más que una simple aplicación es todo un Os presento una impresionante aplicación para Android la que, como una navaja suiza, esconde un montón de sorpresas y herramientas útiles.
Fampiharana Android tsara indrindra hanaovana antso an-tsary
Ireo rindranasa Android dimy tsara indrindra hanaovana antso an-tsary. Jereo ireto rindranasa ireto ahafahanao miantso video.
Monkey, ny fampiharana horonan-tsary malaza hamerana anao amin'ny chat 15 segondra
Afaka mihanika hazo samihafa ao Monkey ianao izao mba hiresaka amin'ny olon-tsy fantatra mandritra ny 15 segondra amin'ny lohahevitra manokana.
Efa manana ny fahitana rohy mampiahiahy hita ao amin'ny WhatsApp ianao
Misy fepetra fiarovana tonga amin'ny WhatsApp: ny fahitana rohy mampiahiahy izay nizara fifandraisana tao amin'ny varavarankely fifampiresahana.
Ahoana ny fomba fampidinana mozika amin'ny kalitaon'ny feo avo indrindra. FLAC !!
https://youtu.be/wJYRiDiYDBg En los tiempos de streaming que estamos ya casi nadie lleva música de manera física en su Smartphone y, pero aunque nos Vídeo en el que les enseño a descargar música en formato FLAC de alta calidad, M4a de 500 Kbps o seleccionar la calidad de descarga que más te convenga.
Instagram dia mizaha toetra ny fanehoan-kevitra toy ny Facebook amin'ny Tantara
Ny Instagram dia mizaha toetra ny Instagram Stories hoe inona ny fanehoan-kevitra toy ny Facebook mba hahafahanao maneho hevitra amin'ny fomba hafa.
Ahoana ny fomba filalaovana ny lalao PC amin'ny findainao Android miaraka amin'ny Steam Link
Steam Link dia mamela anao hilalao ny lalao Steam tianao indrindra amin'ny findainao Android raha mbola eo amin'ny fifandraisana eo an-toerana ihany ianao.
Ny App Store dia manana karama Google Play indroa fa ny antsasaky ny alaina
Fikarohana vaovao iray no namoaka fa ny App Store dia manana indroa ny vola azon'ny Google Play na dia manana ny antsasaky ny fampidinana azy aza
Ny beta farany farany an'ny WhatsApp dia mampiseho topy maso ny sticker
Tsy ho ela dia hanana sticker sticker i WhatsApp, ny beta manaraka dia mampiseho topy maso ary angona hafa
Ho avy tsy ho ela ao amin'ny Microsoft Edge ny fandikana tranonkala
Microsoft Edge dia havaozina amin'ny fandikana pejin-tranonkala. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ho avy tsy ho ela amin'ny browser.
Spotify Lite dia misy tsy ofisialy ho an'ny Wear OS
Mpampiasa XDA Developers dia namoaka kinova tsy ofisialy Spotify Lite for Wear OS izay ahafahantsika mitantana ny fibaikoana ny kaontinay.
Fampiharana eReader tsara indrindra ho an'ny Android
Fampiharana eReader dimy tsara indrindra ho an'ny Android. Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa ireo hamakianao ireo e-book amin'ny Android.
Ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android TV
Ny rindranasa dimy tsara indrindra ho an'ny Android TV, Jereo ity safidin'ny rindranasa azontsika alaina amin'ny Android TV izao.
XBrowser, na browser hafa hisolo ny Chrome sy Firefox amin'ny fametrahana 1MB
1MB milanja XBrowser, mpizaha tranonkala iray izay te-ho tonga solo tsara indrindra ho an'ireo malaza kokoa toa an'i Firefox na Chrome.
[Lahatsary] Ady amin'ireo mpizaha tranonkala dia mitady ny haingana indrindra izahay
Ny bara fitetezana farany eto amin'ny Twitter dia efa misy ofisialy
Afaka mampiasa Twitter amin'ny tanana iray ianao izao amin'ny alàlan'ny fanananao ny bara fitetezana ao amin'ny app ho an'ny fitaovana Android eo ambany.
Ny OnePlus dia manavao ny fampiharana Galerie ahafahantsika manaparitaka horonan-tsary ary manampy mozika any aoriana
OnePlus dia nanomboka nandefa fanavaozana vaovao momba ny fampiharana Gallery ho an'ireo toeram-piantsonan'izy ireo manampy ny asany vaovao.
Firefox Notes: Torolàlana momba ny fametrahana tsikelikely sy ny fampiasana azy amin'ny PC sy Android
Fampianarana azo ampiharina izay asehoko anao ny fomba fametrahana ny rindranasa Firefox Notes vaovao amin'ny Android sy PC ary koa ny torolàlana azo ampiharina hampiasaina.
Azonao atao izao ny mampiasa ny zanabolana an'ny Google Maps amin'ny Android Auto ao amin'ny fampiharana fiara
Raha manana fiara misy Android Auto napetraka ao amin'ny rafitry ny fiara ianao dia efa afaka mampiasa ny zanabolana Google Maps.
Ahoana ny fomba fametrahana fanontaniana amin'ny Instagram Stories: ny zava-baovao ao amin'ny Instagram
Instagram dia nanao ny fahatongavan'ireo fanontaniana tao amin'ny Instagram Stories ho ofisialy. Azonao atao ny manao azy ireo amin'ny taratasy fametaka fanontaniana.
Ny fanavaozana farany an'i Netflix dia ahafahantsika misintona atiny ho azy
Ny fampidinana votoaty mandeha ho azy dia misy amin'ny app Netflix ho an'ny ekosistema Google an'ny Google.
Ahoana ny fampiasana Waze fa tsy Google Maps amin'ny Android Auto
Avy amin'ny Waze beta dia azonao ampiasaina izany fa tsy Google Maps amin'ny Android Auto, raha te hanararaotra angona manokana avy amin'ilay voalohany.
Spotify izao dia mamela anao handamina ny hira ao anaty playlists amin'ny findainao Android
Manomboka androany amin'ny Android dia azonao atao ny manova ny filaharan'ny hira ao amin'ny lisitra Spotify. Zava-baovao ho an'ny OS Google.
Ahoana ny fanovana ny menio fizarana Android
Ny fampiharana kalandrie an'ny Samsung izao dia mamela anao manampy sticker amin'ny fotoana voatondro
Samsung dia manohy manavao ny fampiharana azy amin'ny alàlan'ny fampidirana ny asany amin'ireo terminal efa taloha misy ao amin'ny Galaxy S9
Mamorona endrika sy sary mahavariana avy amin'ny findainao miaraka amin'ny Canva
Miaraka amin'i Canva ianao dia hanana safidy hamorona sary manaitra izay hamolavola karatra, pejy Facebook na famintinana.
YouTube Kids nihoatra ny 50 tapitrisa alaina ao amin'ny Play Store
Ny sehatra video an'i Google ho an'ny ankizy, YouTube Kids, dia nihoatra ny 50 tapitrisa alaina ao amin'ny Play Store.
Mitadiava kintana sy antokon-kintana miaraka amin'i SkyView: araho ny planeta Mars amin'ity volana Jolay ity
Zava-dehibe ity volana jolay ity satria handalo akaikin'ny planetantsika tokoa i Mars. SkyView dia hanampy anao hanaraka azy ary hahita ny famirapiratany telo.
Ny Nokia 8810 dia afaka mampiasa WhatsApp
Mety manana WhatsApp ny Nokia 8810. Fantaro bebe kokoa momba ny fahatongavan'ny fampiharana fandefasan-kafatra amin'ny telefaona marika.
Safidy hafa kalitao amin'ny Google Play Store
Ny fampiharana Material Design tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana dimy endrika tsara indrindra ho an'ny Android. Hahafantatra bebe kokoa momba ireo fampiharana mampiasa ity famolavolana ity.
Fampiharana Android tsara indrindra handefasana vola
Ireo rindranasa Android dimy tsara indrindra handefasana vola. Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa mamela anao handefa vola amin'ny namana ireo.
Fantsona tena ilaina amin'ny Telegram anao
Ny mozika dia fomba iray revolisionera hianarana hira marobe
Musitude dia fampiharana vaovao izay mamadika ny klavier finday ho fitaovana mozika hianarana hira marobe.
Ahoana no hanafenana ireo rakitra WhatsApp alaina ao amin'ny galerianao
Azonao atao izao ny manafina ireo rakitra na sary alaina avy amin'ny galerianao manokana. Amin'ity fomba ity dia hamonjy ny fahakiviana tsy ampoizina ianao.
Mampitandrina anao ny WhatsApp raha mandefa rohy mampidi-doza ianao
Mampitandrina anao ny WhatsApp momba ny rohy mampiahiahy. Fantaro bebe kokoa momba ny vaovao vaovao manohitra ny sandoka vaovao tonga amin'ny fampiharana.
Ahoana ny fomba hamerenana ireo sary WhatsApp na rakitra izay nofafanao tamin'ny fitaovanao
Atorinay anao ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny sary WhatsApp voafafa miaraka amin'ny fitaka tsotra izay azo antoka fa tsy ho voamariky ny fampiharana amin'ny chat.
Afaka mampiasa Google Duo amin'ny fitaovanao rehetra ianao nefa tsy voafetra amin'ny karatra SIM
Manomboka androany dia azonao atao ny mametraka ny Google Duo amin'ireo fitaovana finday misy anao manana kaonty Google tsy misy fetra.
Midira ny vinavinan'ny toetrandro avy amin'ny bara fitetezana ny findainao Android amin'ny Navbar Weather
Navbar Weather dia fampiharana maimaim-poana izay miaraka amin'ny tanjona napetraka ao amin'ny bara fitetezana ary hampahafantatra anao ny toetrandro.
Nanambara ny Facebook fa mijanona tsy manohana ny telo amin'ireo fampiharana azy izy
Hanala fampiharana telo i Facebook amin'ny faran'ny volana. Fantaro bebe kokoa momba ireo rindranasa ireo izay hafoin'ny tambajotra sosialy.
Ahoana ny fametrahana apetraka ofisialy Spotify Lite alohan'ny fahatongavany ao amin'ny Google Play
Spotify Lite dia efa natomboka ao amin'ny Google Play Store
Spotify Lite dia misy ao amin'ny Play Store ankehitriny. Fantaro bebe kokoa momba ny kinova lite amin'ny fampiharana mozika streaming malaza.
Ny fampiharana fanofana fiara tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana fivelomana fiara dimy tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ireto rindranasa ireto hanofa fiara amin'ny Android.
Playz dia mametraka anao alohan'ny tranokala sy atiny nomerika avy amin'ny RTVE amin'ny fitaovanao Android
RTVE dia nandefa fampiharana vaovao antsoina hoe Playz izay manolotra atiny an-tserasera manokana ho an'ny mpampiasa maimaimpoana.
Fampiharana tsara indrindra ho an'ny Google Home
Ny fampiharana dimy tsara indrindra ho an'ny Google Home. Fantaro bebe kokoa momba ireo rindranasa ireo izay azonay ampiasaina hivoahana amin'ny mpandahateny Google bebe kokoa.
Ahoana ny fomba hampanginana ireo mpampiasa resaka anaty vondrona amin'ny WhatsApp: inona no vaovao ao amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra
Azonao atao ny misafidy, raha mpitantana WhatsApp ianao, mba hampanginana ny efitrano iray manontolo amin'ny vondrona miresaka mba handefasana hafatra amin'ny tenanao.
Ny tantaran'ny Instagram dia mahatratra 400 tapitrisa mpampiasa isan'andro ary manolotra ny sticker mozika
Ianao dia iray amin'ireo mpampiasa 400 tapitrisa isan'andro miditra miditra hijerena na handefa ny Instagram Stories. Niampy koa ny sticker sticker.
Ny mpilalao horonantsary MX Player dia napetraka tamina fitaovana 500 tapitrisa
Ilay mpilalao horonan-tsary sy feo MX Player dia nihoatra ny 500 tapitrisa alaina ao amin'ny Play Store
Ny kinova «lite» tsara indrindra amin'ny fampiharana sy tambajotra sosialy malaza indrindra
Anisan'ireo kinova "lite" rehetra amin'ity lisitra ity no ananantsika ilay vaovao ho an'ny Instagram, ny iray ho an'ny Google Maps na koa ilay iray ho an'ny Facebook.
YouTube dia mampihetsika ny maody PIP ho an'ireo mpampiasa tsy premium
Tao amin'ny Google dia efa fanaon'izy ireo tamin'ny zavatra hafahafa kely izahay. Tamin'ny fahatongavan'ny Android 8, nampahafantatra ny mety ...
Telegram nohavaozina miaraka amina asa vaovao sy mahaliana
Ny rindranasan-kafatra hafatra Telegram dia nahazo fanavaozana vaovao, fanavaozana izay manampy fiasa vaovao izay tsy ho hitantsika amin'ny WhatsApp na eo aza ny fahombiazany
Instagram Lite: ny kinova ho an'ny telefaona finday tsy misy fahatsiarovana kely
Hita ao amin'ny Play Store izao ny Instagram Lite. Fantaro bebe kokoa momba ny kinova maivana amin'ny fampiharana malaza izay milanja ambany noho ny 200 kb.
Fantatrao ve hoe adiny firy no laninao amin'ny Netflix? Statflix no hilaza aminao
Miaraka amin'ny StatFlix dia hanana eo an-tanantsika ny fahafantarana hoe adiny firy no andaniantsika isan'andro amin'ny Netflix ary iza no andian-tantara ankafizinay.
IGTV no fampiharana Instagram hiara-manangana fahitalavitra
Ny IGTV, miaraka amin'ireo mpampiasa an-tapitrisany ananan'i Instagram, dia afaka ny ho tonga fahita lavitra amin'ny fahatanorantsika rehetra.
Google Duo dia hitsahatra tsy handray fanavaozana amin'ny fitaovana miaraka amin'ny Android Jelly Bean
Ny rindranasan'ny antso an-tsarimihetsika Google an'ny Google, Google Duo, dia tsy hahazo fanavaozana amin'ny terminal intsony tantanan'ny Android Jelly Bean.
Miaraka amin'ny flowkey dia manana mpampianatra ianao izay "mihaino" hampianatra anao mitendry piano
flowkey dia manolotra rindranasa ho an'ny fitaovana finday izay mametraka anao eo alohan'ny mpampianatra piano iray izay hihaino ny naoty mba hahafahanao mianatra hira.
Haneho amintsika ny fotoana laninay amin'ny fampiharana i Facebook
Hasehon'ny Facebook anao ny fotoana laninao amin'ny fampiharana. Fantaro bebe kokoa momba ny fiasa izay ho avy tsy ho ela amin'ny tambajotra sosialy hitantanana ny fampiasana nataonao.
Ahoana ny fomba handefasana hafatra manimba tena amin'ny WhatsApp
Manatsara ny fiainantsika manokana ny fanavaozana farany an'i Outlook ho an'ny Android
Ny fanavaozana farany ny rindranasan'ny mailaka an'i Microsoft, Outlook, dia nohavaozina hanatsarana ny fiainantsika manokana.
Microsoft Edge for Android dia navoazina in-dimy tapitrisa
Microsoft Edge dia nahatratra dimy tapitrisa fisintomana. Fantaro bebe kokoa ny fahombiazan'ny browser amin'ny Play Store izay efa mihoatra ny dimy tapitrisa.
Fampiharana tsara indrindra hampitahana ny vidin'ny hotely sy sidina
Fampiharana Android dimy hampitahana ny vidin'ny hotely sy sidina. Jereo ireto rindranasa Android ireto izay kasainao handaminana ny vakansy.
Mihirà amin'ny duet na amin'ny vondrona miaraka amin'i Smule, ilay fampiharana hampahafantarana ny feonao
Misy fampiharana vitsivitsy izay mitovy amin'ny Smule, satria mamela anao hihira amin'ny duet na amin'ny vondrona izy ary hanambara ny feo tsara izay anananao.
Ny fampiharana feo fialan-tsasatra tsara indrindra ho an'ny Android
Rindrambaiko feo miala sasatra dimy ho an'ny Android. Jereo ity safidin'ireo rindranasa feo miala sasatra efa misy ity
Alefaso amin'ny Internet ny lalaoo amin'ny Mobcrush, miandry anao ny vondrom-piarahamonina iray manontolo
Mobcrush dia vondrom-piarahamonina kilalao izay miavaka amin'ny famelana mpilalao an'arivony handefa lalao an-tserasera mivantana.
WhatsApp dia hampiditra fanehoan-kevitra miaraka amin'ny sticker amin'ny fampiharana
WhatsApp dia efa miasa amin'ny fanehoan-kevitra miaraka amin'ny sticker. Fantaro bebe kokoa momba ilay fiasa vaovao izay ho tonga amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra izay efa manomboka mampiasa sticker
Google Play dia efa manamora ny fanafoanana ny famandrihana
Google Play dia manolotra fizarana hitantanana famandrihana. Fantaro bebe kokoa momba ity fizarana vaovao ity izay ahafahantsika mahita ny famandrihana ananantsika
Farany dia tonga ilay mikasika "manokana" bebe kokoa an'ny Google Assistant
Ny hevitra dia ao amin'ny "trano" an'ny Google Assistant dia ho hitanao ny fampahalalana ilainao rehetra ary miaraka amin'izay dia fantatrao izay rehetra miandry anao mandritra ny andro.
Fampiharana izay tsy hitanao ao amin'ny Google Play Store ary tsy azonao hadinoina amin'ny Android anao
Efa mahatratra 1.000 XNUMX tapitrisa ny mpampiasa Instagram
Instagram dia efa nahatratra mpampiasa 1.000 lavitrisa. Fantaro bebe kokoa momba ny isan'ny mpampiasa efa azon'ny tambajotra sosialy.
Adobe Spark Post dia tonga amin'ny Android amin'ny beta: mamorona sary manaitra
Adobe Spark Post dia rindrambaiko Android vaovao ahafahanao mamorona sary manaitaitra ampidirina amin'ny media sosialy.
Google Lens dia misy amin'ny OnePlus [apk]
Raha te-hisintona ny kinova vaovao an'ny fakantsary OnePlus miaraka amina Google Lens ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanaovana izany.
Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary mitsangana adiny iray amin'ny Instagram: eto ny zava-baovao ateraky ny tambajotra sosialy
Raharaha minitra vitsy dia azonao atao ny mampakatra horonantsary adiny iray amin'ny Instagram azo alaina amin'ny telefaonao. Tena misy fetrany ihany anefa.
TuLotero: Ny fampiharana hilalao loteria na aiza na aiza misy anao
TuLotero: Milalao loteria na aiza na aiza misy anao. Jereo ity fampiharana sy tranokala ity izay ahafahanao milalao loteria amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza.
Google Podcasts izao amin'ny Android: misy izao miaraka amina podcast 2 tapitrisa voatanisa
Google Podcasts amin'ny Android dia ahafahanao miditra amin'ny podcast marobe maherin'ny 2 tapitrisa avy amina fampiharana tena mitandrina amin'ny lafiny hita maso.
Google Maps dia nanala ny fampidirana Uber nefa tsy nanome fanazavana
Ny serivisy Google Maps dia nanafoana ny fahafaha-mangataka Uber mivantana avy amin'ny rindran-tsarintany.
Word dia mpamaky feed RSS tena feno sy ankehitriny amin'ny famolavolana
Raha reraky ny Feedly na ny gReader efa antitra ianao, Palabrare dia mpamaky fahana RSS tena tsara noho ny kalitaony hita maso ary koa ny endri-javatra.
Tonga tao Espana ihany ny YouTube Music androany
Tonga any amin'ny firenena 17 ny YouTube Music ao anatin'izany ny tenantsika hankafy horonan-tsary mozika tsy misy doka sy ny fahaizana milalao ao ambadika.
Ny fampiharana fampahatsiahivana tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana fampahatsiahivana tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ireto rindranasa dimy ireto miaraka amin'ny fampahatsiahivana ny karazan-karazany rehetra ao amin'ny Play Store.
Ny fampiharana kafe tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana kafe dimy tsara indrindra ho an'ny Android. Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa kafe izay ananantsika ao amin'ny Play Store.
Aza adino ny Tompondaka Eran-tany amin'ny FMdB, angon-tahiry lehibe indrindra amin'ny lalao mahafinaritra
Miaraka amin'ny FMdB dia ho eny an-tananao ny tahiry baolina kitra lehibe indrindra eto an-tany. Fampiharana maimaim-poana izay ahafahanao mahafantatra ny antsipiriany rehetra momba ny fitaovana.
Mpilalao mozika mampino mahatalanjona miaraka amin'ny maody tsy andoavam-bola
Hitsahatra tsy hampandre anao ny Instagram rehefa maka pikantsary amin'ny tantara iray ianao
Tsy hampandre ny Instagram rehefa vita amin'ny tantara ny sary. Ny tambajotra sosialy dia manafoana ny iray amin'ireo asany mampiady hevitra indrindra. Fantaro bebe kokoa.
%% Famerenana horonan-tsary feno miampy ny fandefasana ilay mpandahateny Energy Sistem Bluetooth vaovao, ny Energy Music BOX 5+ YALL Edition%
Clue, ny fampiharana tsara indrindra hanarahana ny tsingerim-bolana
Miaraka amin'i Clue dia tsy afaka mangataka zavatra bebe kokoa ianao, satria izahay miaraka amin'ny fampiharana tsara indrindra hifehy ny tsingerim-bolana ary hahafantatra ny lamina tokana.
WhatsApp dia hanohy hanolotra fanohanana ny Android Gingerbread hatramin'ny 2020
Ny rindranasan-kafatra hafatra WhatsApp dia nanambara fa hanohana hatrany ireo fantsona rehetra mihodina amin'ny Gingerbread hatramin'ny 2020 izy.
Iray amin'ireo fampiharana galeria sary tsara indrindra ho an'ny Android. SPECTACULAR !!
Google Play dia mamela ny mpamorona handoa vola amin'ny fividianana fampiharana
Fantaro misimisy kokoa momba ny fepetra vaovao raisin'ny Google Play hanamorana ny famerenam-bola amin'ny fampiharana sy ny famandrihana ho an'ny mpampiasa.
Ahoana ny fomba hijerena maimaimpoana ny lalao rehetra amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny taona 2018 any Russia
Ny fandikan-teny ivelan'ny fandikan-teny Google dia misy amin'ny fiteny 59 izao
Manatsara ny fandikan-teny ivelan'ny fiteny amin'ny fiteny 59 ny Google Translate. Fantaro bebe kokoa ny fanatsarana azo amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina artifisialy.
[APK] LinageOS Eleven Music Player
Instagram dia hampiditra ny kinovan'ny YouTube azy amin'ny herinandro ambony
Ny Instagram dia hampiditra ny sehatra video-ny amin'ny herinandro ambony. Fantaro bebe kokoa momba an'ity sehatra ity izay mitady hifaninana amin'ny YouTube.
Ny app LaLiga dia mpitsikilo amin'ny bara mampiasa mikrô finday
Ny app LaLiga dia mangataka fahazoan-dàlana hampiasa microphone an-tariby. Fantaro bebe kokoa momba ny alalana vaovao mampiady hevitra izay angatahin'ilay fampiharana.
Gmail for Android dia havaozina amin'ny fihetsika vaovao
Gmail manavao ny fampiharana Android amin'ny fihetsika. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana tonga amin'ny mailaka fampiharana.
myTuner Radio, ny fomba tsara indrindra mihaino ny gara tianao indrindra amin'ny findainao
Ny fampiharana myTuner Radio dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra, raha tsy fampiharana tsara indrindra afaka mihaino ireo onjam-peo ankafizintsika amin'ny Internet. Sintomy ary andramo ity fampiharana ity amin'ny fidirana eto.
Ny fampiharana labiera tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana Android dimy tsara indrindra momba ny labiera. Jereo ireto rindranasa labiera azonao sintonina izao avy amin'ny Play Store amin'ny findainao.
Ny fampiharana Android tsara indrindra ho an'ireo mpitia divay
Ny fampiharana Android efatra tsara indrindra momba ny divay. Fantaro bebe kokoa momba ireo rindranasa ireo izay hanampy anao hahafantatra bebe kokoa momba ny divay.
Hakatona amin'ny 17 Jolay maharitra ny Yahoo Messenger
Voamarina: mikatona ny Yahoo Messenger amin'ny 17 Jolay. Fantaro bebe kokoa momba ny faran'ny fampiharana izay ho tonga afaka iray minitra kely.
[APK] Ahoana ny fametrahana Google Camera tsy misy ROOT
Tutorial video azo ampiharina izay ampianariko azy ireo hampidina sy hametraka ny fakan-tsarin'i Google tsy mila Root, ny fampidinana sy fametrahana fametrahana fampiharana amin'ny endrika apk fotsiny.
Raha avy any Amazon Prime ianao izao dia afaka miditra amin'ny Amazon Music maimaim-poana
Ankehitriny Amazon Music dia maimaim-poana ho an'ny mpanjifa Amazon Prime. Safidy hira 2 tapitrisa ary famerana 40 ora isam-bolana tsy misy doka ary miaraka amin'ny safidy afaka misintona hihaino ivelan'ny Internet hatrany.
Ny WhatsApp dia manala ilay mpitam-peo, satria zara raha misy mampiasa azy
Manjaka erak'izao tontolo izao ny rindranasan-kafatra hafatra, hofoanany amin'ny fanavaozana manaraka ny safidy afaka manao rakipeo am-peo handefasana azy ireo avy eo.
Ahoana ny fakana sary panoramic amin'ny 3D toy ny amin'ny Huawei P20 PRO amin'ny Android rehetra
Lahatsoratra-video izay anazavako ny fomba hakana sary panoramic amin'ny 3D toy ny ao amin'ny Huawei P20 PRO efa misy Android izao, manazava ny fomba ahazoana azy mora foana izahay.
Fampiharana Android tsara indrindra hilalao piano
Ireo rindranasa Android efatra tsara indrindra hitendry piano. Jereo ireto rindranasa efatra ireto hahafahanao mianatra mitendry piano amin'ny fomba tsotra amin'ny telefaona Android.
Ny mpamorona dia afaka manakana ny fampiharana ho an'ny telefaona Android Go
Hisakana ny fampiharana ho an'ny Android Go ny mpamorona. Fantaro bebe kokoa momba ity fanapahan-kevitra ity izay mitady hisorohana ireo mpampiasa finday ambany tsy hisintona rindranasa izay tsy mandeha amin'ny telefaona findainy.
Fampiharana Android mahasoa amin'ity fahavaratra ity
Fampiharana Android ilaina dimy amin'ity fahavaratra ity. Jereo ireo rindranasa ireo izay ho mora kokoa aminao ny mandahatra ny fahavaratrao ary mankafy ny fialantsasatrao bebe kokoa.
Ny fampiharana tsara indrindra hanarahana ny Tompondaka Eran-tany amin'ny Soccer 2018
Ireo rindranasa efatra tsara indrindra hanarahana ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny baolina kitra 2018. Jereo ireto fampiharana ireto mba hahalala hatrany ny zava-mitranga any Russia amin'ity fiadiana ny amboara eran-tany amin'ity taona ity
Chrome 67 ho an'ny Android dia tonga miaraka amin'ny zava-misy virtoaly sy mitombo
Chrome 67 dia mitondra ny zava-misy marimarina sy virtoaly ho an'ny Android. Fantaro misimisy kokoa momba ny fanavaozana ny fanamoriana vaovao, izay mamela antsika hanana fiasa sy fanatsarana vaovao isan-karazany.
Hanala ny fampiharana Groove Music amin'ny Play Store i Microsoft
Hisintona amin'ny Play Store i Microsoft, ilay fampiharana Groove Music ahafahantsika miditra amin'ny mozika voatahiry ao amin'ny OneDrive.
Google Lens dia manitatra amin'ireo telefaona Android tohana rehetra
Google Lens dia manomboka tonga amin'ny telefaona Android mifanentana. Fantaro bebe kokoa momba ny fanitarana ny Lens amin'ny telefaona vaovao, izay ho tonga any Espana ihany koa.
Mpilalao mozika eo an-toerana mahavariana ary mandeha maimaim-poana
Mpandefa mozika maimaimpoana maimaimpoana ary mpitendry mozika eo an-toerana izay hamela anao amin'ny vavanao hisokatra amin'izay rehetra atolotray azy, noho ny interface tsara ary satria afaka mandefa ny lisitry ny lisitry ny YouTube izahay mba hihainoana fotsiny ny audio na dia novonoina aza ny efijery.
Weather Live PRO izao maimaim-poana mandritra ny 7 andro fotsiny !!
Azonao atao izao ny misintona ny application Weather Live PRO, iray amin'ireo fampiharana toetr'andro tsara indrindra, maimaimpoana mandritra ny 7 andro fotsiny, ka mitahiry vola mihoatra ny 4 Euros amin'ny vidiny mahazatra anao.
Nanjavona tao Espaina ny Google Play Newsstand
Ny Google Play Newsstand dia manjavona any Espana tsy misy fampandrenesana mialoha. Fantaro misimisy kokoa ny momba ny faran'ny serivisy namela anao hisoratra anarana amin'ny magazine any Espana, tsy misy fampandrenesana avy amin'i Google.
Fampiharana Android tsara indrindra hianarana teny frantsay
Ny fampiharana Android efatra tsara indrindra hianarana teny frantsay. Jereo ireo rindranasa ireo izay hahafahanao mianatra frantsay mora foana amin'ny telefaona Android anao.
Ny fampiharana Android tsara indrindra amin'ny dia an-tongotra
Ny fampiharana Android efatra tsara indrindra amin'ny dia an-tongotra. Jereo ity safidin'ireo rindranasa Android ity izay hivoahanao ho eo amin'ny natiora dia tena hahazo aina anao.
Ny fampiharana tsara indrindra hianarana Alemanina amin'ny Android
Ireo rindranasa efatra tsara indrindra hianarana Alemanina amin'ny Android. Jereo ireto rindranasa ireto hahafahanao mianatra ilay fiteny mora foana.
Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny fanaovana sary amin'ny Android
Ireo rindranasa efatra tsara indrindra hisarihana amin'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ity fifantenana rindranasa ity hahafahanao manintona amin'ny findainao Android mora foana.
Ahoana ny fananana ireo fihetsika amin'ny efijery Android P na iPhone X. (Nohavaozina, ankehitriny dia miasa miaraka amin'ireo terminal misy bara fitetezana)
Fampiharana maimaim-poana ho an'ny Android izay hananantsika fihetsika eo amin'ny efijery toy ny Android P na Apple's iPhone X tenany.
Rindramba hamaha tarehy miampy feo
Mamakafaka amin'ny an-tsipiriany izahay na amin'ny tsara na amin'ny ratsy, ny fiheverana ny fampiharana ny famohana ny tarehin-kira kokoa noho ny fahamarinana toa mahaliana kokoa
WhatsApp dia efa mamela anao hanafina ireo sary azonao ao amin'ny galeriana
WhatsApp dia mamela antsika hanafina ireo sary azontsika avy amin'ny galeriana. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao izay efa beta ho an'ny fampiharana fandefasan-kafatra.
Ny fiasan'ny fifandraisana moana dia tonga amin'ny Instagram
Tsy ho ela ny Instagram dia hamela antsika hampangina ny fifandraisana amin'ny endriny vaovao. Mianara bebe kokoa momba ilay fiasa vaovao mifampiteny am-bava hampiatoana ny fahitany ny lahatsorany nefa tsy mila manakana na mamafa izany olona izany
Google Duo dia hamela antsika hizara ny efijery finday avo lenta
Ny fampiharana hiantsoana horonan-tsary Google, Google Duo, dia hahafahantsika mizara ny efijery finday avoakanay amin'ny mpiara-miasa amintsika
Microsoft Word for Android dia napetraka in-500 tapitrisa
Microsoft Word dia nisintona in-500 tapitrisa tao amin'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ny fahombiazan'ny fampiharana Microsoft tamin'ny telefaona Android.
Serivisy fandefasana mozika Tidal voampanga ho nanandoka ny angona
Ny serivisy mozika streaming an'i Tidal dia miatrika andianà olana amin'ireo mpanakanto sasantsasany, noho ny fiheverana fa nitombo ny isa.
Ny antso an-tsarimihetsika vondrona ao amin'ny WhatsApp dia manomboka mahazo ireo mpampiasa
Manomboka mampiditra antso anaty horonantsary vondrona ny WhatsApp. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao tonga amin'ny fampiharana, tapa-bolana taorian'ny nanamafisana ny fampidirana azy.
Ny safidy tsara indrindra amin'ny Google Tasks
Ireo safidy efatra tsara indrindra amin'ny Android mankany amin'ny Google Tasks. Tadiavo ireo rindranasa ireo izay mety afaka soloina ny rindranasa Google.
Fampiharana Android tsara indrindra hifanena amin'ny olona
Ny fampiharana Android telo tsara indrindra hihaonana amin'ny olona vaovao. Zahao ireo rindranasa ireo ho an'ireo mpampiasa izay afaka afaka mihaona amin'ny olona vaovao.
Inona no tsy hita! Nangataka fahazoan-dàlana ho antsika ny Facebook ankehitriny
Ny fangatahana Facebook dia mangataka alalana amin'ny root amin'ny mpampiasa. Fantaro misimisy kokoa momba ilay bibikely izay hita tao amin'ilay rindranasa izay mangataka amin'ireo mpampiasa hanome alalana amin'ny faka.
[APK] Sintomy ary apetraho ny kinova farany an'ny Dragon Ball Legends alohan'ny ahatongavany ao amin'ny Play Store
Izahay dia efa manana ny Dragon Ball Legends APK ho an'ny mpampiasa anay ao amin'ny vondron'olona Androidsis, lazainay aminao ny fomba hametrahana ny lalao vaovao an'ity franchise malaza ity dieny izao.
Ahoana ny fametrahana ny mpilalao mozika Huawei P20 amin'ny Android rehetra
Tutorial video izay asehoko anao ny fomba fametrahana ny mpilalao mozika an'ny Huawei P20 amin'ny karazana Android terminal misy ny Android 4.2 na ny avo indrindra amin'ny Android.
[APK] Sintomy ny Shazam Lite
Tutorial video izay asehoko anao ny fomba fametrahana Shazam Lite na dia misy aza ny fameperana ara-jeografika dia tsy ao amin'ny Play Store ao amin'ny firenenao izany.
YouTube dia mizaha toetra tsy mitombina amin'ny rindranasa Android
Google goavam-pikarohana Google dia mizaha toetra vaovao antsoina hoe mode Incognito, izay hahafahantsika mikaroka ny sehatra video YouTube nefa tsy mamela soritra.
Ny fampiharana Android tsara indrindra hiarovana ny fiainanao manokana
Fampiharana Android dimy hiarovana ny fiainanao manokana. Jereo ity safidin'ireo fampiharana natokana hiarovana ny tsiambaratelon'ny mpampiasa ity amin'ny fotoana rehetra.
Ny fampiharana loharano misokatra tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana loharano misokatra efatra tsara indrindra ho an'ny Android. Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa open source azonao sintonina amin'ny findainao Android ireo.
Fampiharana Android tsara indrindra ho an'ireo bilaogera
Ny fampiharana Android efatra tsara indrindra ho an'ireo bilaogera. Jereo ireto rindranasa mety indrindra ireto ho an'ireo mpampiasa rehetra izay manana ny bilaoginy ary afaka mivoaka bebe kokoa amin'izany na mampakatra atiny tsara kokoa.
Safidy azo antoka hampidina apks
Horonantsary izay anehoako anao safidy azo antoka hampidina apks ho an'ny Android, amin'ny fotoana anehoako anao ireo torohevitra fototra hahazoana antoka fa apk izay ampidininay avy amin'ny tamba-jotra dia apk azo antoka.
Ny vaovao rehetra momba ny Google Assistant dia natolotra tao amin'ny Google I / O 2018
Mpanampy Google: Vaovao atolotra ao amin'ny Google I / O 2018. Fantaro bebe kokoa momba ny vaovao ho avy tsy ho ela ny mpanampy ny orinasa. Natolotra tao amin'ny Google I / O 2018 izy rehetra.
Ny vaovao rehetra avy amin'ny Google Photos natolotra tao amin'ny Google I / O 2018
Google Photos: Inona no Vaovao ao amin'ny Google I / O 2018. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fiasa vaovao ho avy tsy ho ela amin'ny fampiharana Photos for Android.
Google Play Awards 2018: Nambara ny lalao sy ny fampiharana mandresy
Nambara ny mpandresy ny loka Google Play Awards 2018. Jereo hoe fampiharana sy lalao iza no nanjary mpandresy tamin'ireto loka ireto.
Ahoana no hamoahana audio amin'ny horonan-tsary mora
Fampianarana video tsotra azo ampiharina Android izay ampianariko anao ny fomba hanovozana feo avy amin'ny horonan-tsary amin'ny fomba tena tsotra.
Sarimihetsika antso manokana sy amin'ny fomba mahafinaritra
Tutorial video izay asehoko anao ny fomba fananana efijery antso ho anao manokana fa tsy mila ROOT. Fiantsoana manokana ho antsika na amin'ny alàlan'ny modely efa voafaritra mialoha, maimaim-poana izany rehetra izany.
Ny fampiharana anime sy manga tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana manga sy anime efatra tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity safidin'ireo fampiharana manga sy anime azontsika alaina ao amin'ny Play Store amin'ny finday Android ity.
Fampiharana Android miasa tsy misy fifandraisana Internet
Fampiharana Android 4 izay miasa tsy misy fifandraisana Internet. Fantaro bebe kokoa momba ireo rindranasa ireo izay miasa tsy misy fifandraisana Internet mora amin'ny findainao.